Vaovao - Eo ambanin'ny toekarena maitso, ny vokatra fonosana fitaratra toy ny tavoahangy fitaratra dia mety hanana fotoana vaovao
Amin'izao fotoana izao, ny "fandotoana fotsy" dia nanjary olana ara-tsosialy iray atahoran'ny firenena rehetra manerantany. Zavatra iray na roa dia azo jerena amin'ny fitomboan'ny tsindry ataon'ny fireneko amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Eo ambanin'ny fanamby sarotra ateraky ny fandotoana ny rivotra dia nifantoka tamin'ny toekarena maitso ny firenena. Ny orinasa koa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fampandrosoana sy fampiroboroboana ny vokatra maitso. Ny fitakiana tsena sy ny andraikitra ara-tsosialy miaraka dia niteraka andiana orinasa tompon'andraikitra amin'ny fomba famokarana maintso.
Ny vera dia mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny tsenan'ny fonosana fitaratra sy ny fanamasinana. Antsoina hoe karazana fonosana vaovao izy io noho ny fiarovana ny tontolo iainana, ny fahamafisan'ny rivotra, ny fanoherana ny hafanana avo, ary ny fanamorana azy, ary mitana ampahany amin'ny tsena izy. Etsy ankilany, miaraka amin'ny fampitomboana ny fahafantaran'ny mponina ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny harena, ny kaontenera fonosana fitaratra dia nanjary fitaovana famporisihan'ny governemanta tsikelikely ary nitombo koa ny faneken'ireo mpanjifa ny kaontenera fonosana vera.
Ilay antsoina hoe fonosana fitaratra fitaratra, araka ny anarany, dia fitoeran-javatra mangarahara vita amin'ny vera vita amin'ny vera amin'ny alàlan'ny fitsofana sy famolavolana. Raha ampitahaina amin'ny fonosana nentim-paharazana dia manana tombony ny fiovan'ny fananana tsy ara-materialy, ny harafesina tsara ary ny fanoherana ny harafesin'ny asidra, ny sakana tsara ary ny valin'ny famehezana, ary azo averina amin'ny lafaoro. Noho izany dia be mpampiasa amin'ny zava-pisotro sy fanafody ary saha hafa izy io. Tao anatin'izay taona lasa izay, na dia nitaky firosoana ambany aza ny fangatahana kaontenera fonosana vera eo amin'ny tsena iraisampirenena, dia mbola mitombo haingana hatrany ireo kaontenera fonosana fitaratra amin'ny resaka fonosana sy fitehirizana karazan-toaka isan-karazany, tsiro sakafo, reagents simika ary zavatra ilaina isan'andro.
Amin'ny sehatra nasionaly, miaraka amin'ny fandrosoana mitohy amin'ny "fanavaozana ny rafitra eo amin'ny lafiny famatsiana" sy ny "fanamafisana ny ady ho fiarovana ny tontolo iainana" ary ny fidirana henjana kokoa amin'ny indostria, ny fireneko dia nametraka politika fidirana ho an'ny indostrian'ny vera ampiasaina isan'andro hifehezana ny famokarana , fiasa sy fiasa amin'ny fampiasam-bola amin'ny indostrian'ny vera ampiasaina isan'andro. Mampiroborobo ny fitsitsiana angovo, ny fihenan'ny famoahana ary ny famokarana madio, ary mitarika ny indostrian'ny vera isan'andro mba hivoatra amin'ny sehatry ny fitehirizana harena sy ny tontolo iainana.
Eo amin'ny haavo tsena, raha te hifanaraka amin'ny fifaninanana mahery vaika eo amin'ny tsenan'ny fonosana iraisam-pirenena, dia manohy mampiditra fitaovana vaovao sy mandray teknolojia vaovao ny mpanamboatra kaontenera fitaratra fitaratra vahiny sy departemanta fikarohana siantifika vaovao, izay nahavita fandrosoana betsaka tamin'ny fanamboarana ny kaontenera fonosana vera. Ny vokatra ankapobeny amin'ny kaontenera fonosana fitaratra dia nihazona fitomboana mitohy. Raha ny antontan'isa avy amin'ny Qianzhan.com, miaraka amin'ny fitomboan'ny fihinanana alikaola isan-karazany, antenaina fa hiakatra 19 703 400 taonina ny vokatra amin'ny taona 2018.
Raha jerena amin'ny tanjona kendrena, ny ambaratonga ankapobeny amin'ny indostrian'ny fanamboarana kaontenera fitaratra dia mitombo, ary ny fahafaha-mamokatra nasionaly fitoeram-bozaka fitaratra dia mitombo haingana. Marihina fa ny kaontenera fonosana fitaratra dia misy lesoka ihany koa, ary mora vaky dia iray amin'ireo lesoka. Noho izany, ny tahan'ny fanoherana ny fiantraikan'ny tavoahangy sy kapoaka fitaratra dia nanjary entana fanandramana lehibe.
Amin'ny fepetra sasany hiantohana ny tanjaky ny fonosana fitaratra, ny fampihenana ny tahan'ny lanjan'ny tavoahangy fitaratra dia ny fanatsarana ny maintso sy ny harinkarenany. Mandritra izany fotoana izany dia tokony homena ihany koa ny maivana amin'ny fonosana fitaratra. Ny fonosana tavoahangy fitaratra dia nibodo haingana ny ampahany tamin'ny tsena niaraka tamina andian-toetra ara-batana sy simika toy ny fiorenan'ny simika, ny fahateren'ny rivotra, ny malama ary ny mangarahara, ny fanoherana ny hafanana avo, ary ny famonoana otrikaina ny fonosana fitaratra. Amin'ny ho avy, ireo kaontenera fonosana vera dia voatery hanana vinavinan'ny fampandrosoana bebe kokoa.
Tavoahangy fitaratra fitaratra misy paompy, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny shampoo, Tavoahangy paompy fitaratra, Tavoahangy fitaratra miaraka amina famoahana paompy, Tavoahangy fitaratra misy paompy famaohana, Tavoahangy paompy fitaratra ho an'ny menaka tena ilaina,